Maxaad ka taqaana naftaada? - NETBEINS
:Maxaad ka taqaana naftaada?
Madaxweynaha Mareykanka Dold Trump ayaa ku qoray Twitter kiisa inuu yahay qof aad u deggan maskax ahaan iyo jir ahaan, laakiin saxafiyiin badan iyo dadka bulshada ka qosliya ayaa arrintaas ku beeniyey iyagoo sheegay inuu yahay qof aan naftiisa ka war hayn, isna aqoon. Marka laga tago hordhacaan yarka ah cilmi baaris badan iyo buugaag […]
By admin August 18, 2019, 1:49 PM
Madaxweynaha Mareykanka Dold Trump ayaa ku qoray Twitter kiisa inuu yahay qof aad u deggan maskax ahaan iyo jir ahaan, laakiin saxafiyiin badan iyo dadka bulshada ka qosliya ayaa arrintaas ku beeniyey iyagoo sheegay inuu yahay qof aan naftiisa ka war hayn, isna aqoon. Marka laga tago hordhacaan yarka ah cilmi baaris badan iyo buugaag badan ayaa laga qoray mowduucaan ah is garashada iyo sida dadku u yaqaanaan naftooda.
Waxaa caalami ahaan la isla qiray in dadku yaqaannaan nafaha dadka kale in ka badan inta ay naftooda ka yaqaanaan. Dadku waxay aad u faaqidaan xaaladaha nololeed ee dadka kale sida kuwa la shaqeeya, waxla barta, qaraabada ama kuwa ay noloshu kala dhaxeyso sida lammaanaha.
Waxa ay dadku ku guul darreystaan inta badan in ay fahmaan naftooda, waxa ay awoodaan iyo waxa aysan karin, waxa ay si dhab ah u doonayaan iyo waxa ay diiddan yihiin. Gabadha la yiraahdo Emily Pronin, oo ka tirsan jaamacadda Princeton University ee dalka Mareykanka kuna takhasustay waxa loo yaqaan self-perception and decision waxa ay leedahay dadka qaar naftooda ayey qalad fahmaan waxa ayna inta badan ku noolaadan waxka duwan waxa ay doonayaan, waxa ay bartaan waxa aysan jeclayn, waxa ay ku dul noolaadaan dad aysan rabin iyo deegaan aysan jeclayn iyagoo u haysta in ay yihiin waxaan waxa ay rabaan.
Cilmi baaris ayaa raadisay sida qofku isku aqoonsan karo iyadoo dadyow kala duwan weydiisay su’aalo isku mid ah, kadibna waxa ay soo saartay in qofku naftiisa ku ogaan karo marka uu ku jiro xaaladaha isaga u gaarka ah sida xanaaqa, walwalka, xanuunka, jamashada uu jecelyahay waxka maqan, cilmi baaristu waxa ay leedahay markaad ku sugantahay xaalad cakiran sida aad u fikirto, su’aalaha aad is weydiiso, adigoon ku tashaneyn awood kale ama gacan labaad waa markaas marka aad is heshay ama ka turjumeyso qofka aad tahay. Cilmi baaristu waxa ay leedahay haddaad gasho imtixaan kadibna ku baasto ama ha ahaado mid waxbarasho ama mid shaqo qofka baasay ma ahan naftaadi saxda ahayd, waxaa baasay qofkii ay rabtay ciddaas Examka qaadday, waayo waxaa suurtagal ah marka aad carrooto iney ciddaasi ku nacdo.
Maxay dadku kuu jecelyihiin marka aad faraxsangahay oo ay kaaga cararaan marka aad xanaaqdo ama murugooto, dadku inta badan waxa ay la dhuuntaan caradooda iyo murugadooda, dadkana waxa ay ka joogaan marka ay faraxsan yihiin, laakiin dhibku wuxuu ka taaganyahay marka dambe ayey isku haystaan iney saxanyihiin oo sidaan laga rabay, waase qalad oo marka dambe waxey jilayaan qofka bulshadu rabtay marka hore ja waxa ay qarinayaan qofkii ay ahaayeen.
Macallinka Cilmi nafsiga ee Simine Vazire ee Jaamacadda California wuxuu leeyahay dadku waxa ay ku ogaadaan labo qofka kale naftiisa labo arrimood iney yihiin dadku fiican akhrinta shaqsiyadda ayna darsaan hab dhaqanka qofka sida fara taag-taagiisa, fadhigiisa, hadalkiisa iyo go’aamadiisa iyo kuwa ku qiimeeya qofka ficil uu sameeyo mar iyo labo ama ha ahaado mid wanaagsan ama ha ahaado mid xun, kadibna iyagaa u sheega qofka nuuca uu yahay waayo siyaabaha qofku isku ogaado waxaa ugu fudud inuu weydiiyo bulshada kale sida ay u arkaan, inkastoo wuxuu leeyahay dadka qaar ay ka cararaan su’aalahaas iney bulshadooda way diiyaan waayo waxey ka cararayaan iney usoo baxdo natiijo aysan ku farxin.
Erika Carlson, oo ka tirsan Jaamacadda Toronto waxey iyaduna leedahay in qofku la sheekeysto bulshada, uuna ka dhageysto sida ay u arkaan sax ma ahan, waayo dadku waxey ku sheegayaan jacayl kooda iyo fikirkooda, laakiin waxaa sax ah in qofku sanad kiiba mar ka fasax qaato deegaan kiisa kuna noolaado muddo yar meel kale kadibna isagu isla sheekeysto, isagoo la hadlaya qalbigiisa iyo maskaxdiisa isagoon ku jirin xaalad ku meel gaar ah sida caro ama farxad saaid ah markaas ayuu qofku heli karaa qofka runta ah ee uu yahay ayey leedahay.
Bal ka warran haddaad is weydiiso ma waxaa jira qof dunidaan jooga oo naftaada kaaga aqoon badan, sow waajibka kowaad ee ku saaran soo ma ahan inaad barato naftaada, fahanto kartidaada si aad u doorato waxaad qaban karto oo aad ka adagtahay, kana fogaato wixii ku dhibaya iyo ciddii aadan fahmi karin, maxaad ugu qasbantahay inaad raalli galiso cid kale naftaada horteed?
Dhacdooyin kii dunida ugu saameeynta badnaa.